कोरोना विरुद्धको युद्ध लड्न के गर्यो मेलम्चीले ? – Mayorkhabar.com
कोरोना विरुद्धको युद्ध लड्न के गर्यो मेलम्चीले ?
mayor khabar २५ बैशाख २०७७ १८:१३	No Comments डम्बर बहादुर अर्यालमेलम्ची नगरपालिका
२५ वैशाख । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण विश्वमा बढदै गएपछि त्यसको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरि नगरपालिकाहरुले गरेका काम र प्रयत्न निकै प्रशंसनीय छन् । कोरोनाको संक्रमणबाट नगरबासीलाई सुरक्षित राख्न मेलम्ची नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरु पनि रातदिन खटिएका छन् । सचेतनाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं अघि बढेको मेलम्ची नगरपालिकाले कोरोनोको कहरपछि अनेकौं काम गरेको छ । यो बीचमा नगरपालिकाले गरेका गतिविधिको बारेमा मेयर डम्बर बहादुर अर्यालसँग मेयर खबरल जान्ने प्रयास गरेको छ ।
कोरोना सचेतना तथा सर्तकता
यो विपदको बेला जोखिम न्यूनीकरण गर्न शुरुका दिनदेखी नै मेलम्ची नगरपालिकाले विशेष सर्तकता अपनाएको छ । कोरोनाको सन्त्रासपछि मेलम्ची नगरपालिकाले कोष समेत खडा गरेको थियो । नगरले खडा गरेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा अहिलेसम्म १ करोड ५० लाख रकम जम्मा भएको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमित बढेपछि सरकारले गत ११ चैतदेखि देशभर लकडाउन गर्यो । लकडाउनलाई सफल बनाउन र नगरभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन मेलम्ची नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि एकसाथ अघि बढिरहेका छन् ।
नगरपालिकाले लकडाउन पूर्ण रुपमा सफल पार्न र कार्यान्वयन गर्न १३ वटै वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्वयंसेवक टोली गठन गरेको छ । त्यो टोलीले आ आफ्नो वडामा निगरानी गर्ने गर्छन । कोरोना नियन्त्रणका लागि मेलम्ची नगरपालिकाले उठाएका कदममा नगरबासीले पनि साथ दिएका छन् ।
क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन
मेलम्ची नगरपालिकाले ३१ बेड क्षमताको सुविधा सम्पन्न व्यक्तिगत र सामूहिक क्वारेन्टाइन बनाएको छ । क्वारेन्टाईनमा अहिले ३ जना बसिरहेका छन् । हालसम्म १५० जना क्वारेन्टाईनको अवधि पुरा गरेर घर फर्केको मेलम्ची नगरपालिकाले जनाएको छ । मेलम्ची नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन मात्र हैन आइसोलेसन पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले आव्ह्रान गरेको लकडाउनका कारण विपन्न, असहाय र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्नेहरु कामविहिन भएपछि मेलम्ची नगरपालिकाले राहत वितरण गरेको थियो । नगरले ४ सय घरपरिवारलाई १५ लाखको विभिन्न खाद्य सामग्री दिएको मेयर डम्बर बहादुर अर्यालले मेयर खबरलाई जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय भने काम गर्न नपाएर समस्यामा परेकाहरुलाई नगरपालिकाले नगरमै काममा लगाउन शुरु गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तीलाई नगरले काम गरेपछि दैनिक ७२० रुपैयाँ ज्याला दिने छ । विशेष गरि सडकको नाली वनाउने र भलको व्यवस्थापन गर्ने काममा उनीहरु जुटेका छन् । रकम हैन खाद्यान्न नै चाहियो भन्नेहरुलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गरिदिने मेयर अर्यालले बताउनुभयो ।
मेलम्ची नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तीहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र घर पठाएको छ । कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट र प्रभावित क्षेत्रवाट आएकाहरुको स्वाब र अन्यको र्यापीड परीक्षण गरेको थियो । ती सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको मेलम्ची नगरपालिकाले जनाएको छ ।
दिर्घरोगीलाई औषधिको व्यवस्था
नियमित औषधि सेवन गर्दै आएका नगरभित्रका दीर्घरोगीलाई मेलम्ची नगरपालिकाले गत मंगलबारदेखी निशुल्क औषधि वितरण गरिरहेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सरकारले लकडाउन जारी राखेपछि दिर्घरोगीहरु बजारसम्म जान नसक्ने र पसलमा आवश्यक औषधि समेत नपाईने भएपछि नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्था मार्फत औषधी वितरण शुरु गरेको हो ।
नगरपालिकाले नगरभित्रका झण्डै १३ सय दिर्घरोगीलाई एक महिनासम्म पुग्ने औषधि दिन लागेको हो । हालसम्म ५, ६, ७ र ११ वडाका दिर्घरोगीहरुलाई नगरपालिकाले औषधि दिईसकेको छ ।
स्वास्थ्य संस्थासम्म आउन नसक्नेहरुलाई नगरले घर घरमै औषधी लगिदिने मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर बहादुर अर्यालले मेयर खबरलाई बताउनुभयो । नगरपालिकाले यसअघि पनि दिर्घरोगीहरुलाई औषधी दिएको थियो ।
Previous Previous post: पढौं, सोचौं, बढौं : लकडाउन र यसका मोडलहरू
Next Next post: आज कपिलवस्तुका दुई यूवामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या एक सय एक
स्वदेश फर्कने नेपालीको ब्यवस्थापनमा सरकारको रणनीनिक योजना २५ बैशाख २०७७ १८:१३
कोरोनाको कहरपछि स्थानीय सरकारका प्राथमिकता तथा जिम्मेवारीहरु २५ बैशाख २०७७ १८:१३
क्वारेन्टाइन बसाईलाई सहज बनाउन योग सिकाउँदै वालिङ २५ बैशाख २०७७ १८:१३
पाईला– समृद्धितिर… २५ बैशाख २०७७ १८:१३
भारतबाट आउनेको संख्या बढेसँगै तुलसीपुरमा क्वारेन्टाइनको क्षमता बढाइँदै २५ बैशाख २०७७ १८:१३